यस महिना को को क्र्याटर .....
प्रश्न यस महिना को को क्र्याटर .....
2 वर्ष4दिन पहिले #696 by PAYSON
नयाँ दृश्य दृश्यहरू मध्ये एक, चन्द्रको क्रेटरहरू धेरै राम्रा कामदार छन्। म आइडीहोमा बस्छु, केवल यो 100 वा यस मील माइल ..... SPECTACULAR!!!! यदि तपाईं JUMBO सदस्य हुनुहुन्छ र तपाईको हार्ड ड्राइभमा ठाउँ छ भने, यो प्रयास गर्नुहोस्। यो बिल्कुल लायक छ। यदि तपाईसँग JUMBO खाता छैन भने, यसले धेरै लामो समय डाउनलोड गर्न सक्छ। तर, तर सबै तिर, यो ठुलो छ।